UYehova Uye Wavula Iintliziyo Zabaninzi | Incwadi Yonyaka Ka-2015
IBALI LOBOMI Wafunda inyaniso eselula waza waba kwinkonzo yexesha elizeleyo kangangeminyaka engaphezu kweyi-50.
NDABHAPTIZWA kwisithuba esimalunga nenyanga ebulewe uTrujillo ngo-1961, ngelo xesha ndandiseyunivesithi ndifundel’ ezomthetho. Utata wayefuna ndisebenze kwiiofisi zomthetho, kodwa ndabona indlela ephakame ngayo imfundo yobuthixo. Ndayishiya iyunivesithi nakubeni utata wayefuna ngamandla ukuba ndifundele ezomthetho. Kungekudala emva koko, ndaba nguvulindlela okhethekileyo.
Enye yeendawo endacelwa ukuba ndiye kusebenza kuzo yayiyiLa Vega apho babendele nzulu ubuKatolika. Ngoxa ndandishumayela apho, akukho noyedwa owamkela inyaniso. Intetho yesidlangalala ndandiyinikela kumzalwana endandishumayela naye kuphela. Sekunjalo, xa ndifunda iBhayibhile, ndisiya ezindibanweni naxa ndithandaza, uYehova wayendipha amandla. Xa ndithetha naye, ndandimbuza ukuba liya kuze libekho na ibandla apha eLa Vega. Ndithetha nawe nje ngoku, kukho iiHolo zoBukumkani eziyi-6 apho, amabandla ayi-14 nabavakalisi abangaphezu kwe-800.
Ngo-1965 ndatshata noÁngela, saza ngo-1981 sabizwa eBheteli. Xa ndandibhaptizwa, kwakukho abavakalisi abayi-681 kuphela kweli. Ngoku kukho abavakalisi abangaphezu kwe-36 000, yaye kwiindibano zethu ezahlukahlukeneyo kuza amawaka ngamawaka abantu. Ndithi ndakukhangela emva, ndingakwazi ukuwuvala umlomo xa ndibona indlela uYehova azivule ngayo iintliziyo zabantu abaninzi bazi iBhayibhile.
IKomiti yeSebe, ukususela ekhohlo ukuya ekunene: UReiner Thompson, uJuan Crispín, uThomas Dean, uLeonel Peguero, uLeonardo Amor noRichard Stoddard